Liiska Bixiyeyaasha SaaS iyo Miisaaniyaddooda Suuqgeynta | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 3, 2015 Wednesday, September 2, 2015 Douglas Karr
Haddii aan la kulmo qof ka socda Vital, waan isku duubi doonaa bani aadminimo. Dhawaan waxaan wadaagnay qoraal ku saabsan miisaaniyadda suuqgeynta saxda ah maadaama ay tilmaamayso boqolkiiba dakhliga guud, laakiin tani waxay bixisaa xoogaa kharashyo miisaaniyadeed oo qotodheer oo taageera isla markaana xoojiya macluumaadka kale ee 'infographic'.
Dhowr sano ka hor, waxaan la shaqeyneynay Software-ka oo ah adeeg bixiye ka tirsan warshadaha Suuqgeynta Suuq geynta oo qarash gareeysay wax ka yar lix miisaaniyad sanadle ah guud ahaan si aan gacan uga geysano wadista saamigooda suuqa.
Waxaan la sameynay hormar la taaban karo iyaga, kordhinta booqashooyinka, saamiyada, iyo iibka uqalma hogaaminta laba-lambar sanad kasta. Miisaaniyadda waligeed isma beddelin, laakiin dalabyadu waxay u muuqdeen inay sii kordhayaan illaa iyo inta aan ka sameyneyno sawir-qaadis, fiidiyowyo sharraxayaal ah iyo xitaa u dhisnay goobo badan iyaga. Waxay ku kala wareegeen shaqaalaha, mid walbana wuxuu rabay inuu jihada beddelo, sidaas darteed xawaare ayaa saameyn ku yeeshay.
Si kastaba ha noqotee, badanaa waxay ahayd wax lagu farxo in la arko waxyaabaha aan u abuurnay iyaga oo ka qaadanaya shaashadda bartamaha goobaha warshadaha iyagoo og in shirkaddu ay ku bixinayso qayb yar oo ka mid ah waxa ciyaartoy waaweyn ay ku lahaayeen warshadahaas. Waxaan ahayn oo aan ku faaneynaa inta aan irbad dhaqaajin karno irbad aan haysano ugu yar. Waxaa laga yaabaa inay tahay awooddeena ugu muhiimsan.
Ka dib maalin maalmaha ka mid ah ayaa dhacday.
Haye, waxaan ku qarash gareyneynaa lacag tan ah waxaanan dabadayada ka laadaneynaa _________.
Taasi waa sida aniga oo kale oo aan la yaabay sababta Mike Tyson uu awood ugu yeeshay inuu igu reebo wareega koowaad.
The tan oo lacag ah halkii miisaaniyadood ay ka yaraayeen $ 0.005 $kiiba $ 1 ee suuq-geynta shirkada ay ka soo xigteen xogtan ayaa qarash gareeysay. Waxaan ka baqayaa inaan ugu yeedho shirkadda tartamayaasheeda, laakiin sidaasay yeeleen waan yeeli doonaa. Tartameyaashoodu waxay lahaayeen munaasabado heer gobol iyo heer qaran ah, ololeyaal raadin lacag ah, maktabad ka kooban waxyaabo qiimo leh, kanaal fiidiyowyo ah oo mowduuc walba ku saabsan, iyo xayeysiis baaxad leh oo ku baxa dhammaan goobaha warshadaha. Daanka ayaa iga dhacay; waan xirxirnay kaqeyb galkii waanan baxnay.
Maaddaama aan u adeegno labadaba bixiyeyaasha shirkadda SaaS ee qaangaarka ah iyo bilowga yar, waa wax aad u xiiso badan in la arko halka qashinku yaal, halka ay saameyntu ku jirto, iyo waxa miisaaniyaduhu yihiin. In kasta oo macluumaadkani uu isku darayo dhammaan suuq-geynta iyo kharashyada iibka, waa inuu qaabeeyaa saamaynta ay ku yeelanayso maalgashiga suuq-geynta weyn iyo iibku shirkadda celcelis ahaan teknoolojiyadda suuqgeynta
Bixiya boqolkiiba inbadan oo ka mid ah dakhligaaga oo ay iska cadahay inaad ka faa'iideysan doonto boqolkiiba inta ugu badan ee koritaanka. Khasab kuguma ahan inaad qarash gareyso, laakiin waa inaad si qoto dheer u qodo.
Tags: miisaaniyadda suuq geynta waxbarashada guud ee Mareykankamiisaaniyada suuqgeynta tufaaxamiisaaniyada suuq geynta teknoolajiyada hoosexiriir joogto ah miisaaniyadda suuqgeyntamiisaaniyadda suuq geynta googlemiisaaniyadda suuq geynta jaamacadda weyn ee canyonmiisaaniyadda shaybaarada idexx suuqgeyntamiisaaniyadda suuqgeynta intelMiisaaniyadda suuqgeynta ku xiranmanhattan waxay kuxirantahay miisaaniyada suuqgeyntamiisaaniyada suuq geynta softiweerkamiisaaniyadda suuqgeyntamiisaaniyadda suuq geynta suuqamiisaaniyadda suuqgeynta microsoftmiisaaniyadda suuqgeynta oraclemiisaaniyadda suuqgeynta rackspacemiisaaniyada suuq geynta iibkamiisaaniyadda suuq geyntatemper miisaaniyadda suuq geynta sealytwitters miisaaniyadda suuq geynta
Waan ku duugi lahaa Vital sidoo kale… waana ku mahadsanyahay wadaagida Doug. Waxaan hubaa inay rajeynayaan inay sameeyaan cusbooneysiin 2015 ah. Waa inaan aaminsanahay in kharashka LinkedIn uu si aad ah u kordhay iyadoo ku saleysan kormeer shaqsiyeed waxaan jeclaan lahaa inaan arko qaar ka mid ah waxyaabaha lagu daro qaybaha suuqa sida suuq geynta iyo fiidiyowga.
Falanqeyn Wanaagsan. Bixiye SaaS ah oo soo koraya ayaa Infographic la daabici doonaa oo lagu hayn doonaa darbiga si loo arko maalin kasta. 🙂
Oktoobar 13, 2015 at 4:33 PM
Maqaal aad u fiican oo leh faahfaahin aad u qiimo badan.
Febraayo 20, 2017 saacadu markay tahay 5: 35 AM
Maqaal xeel dheer! Waxay sidoo kale ahayd fikrad wanaagsan in tan lagu soo bandhigo infographic iyadoo la hubo in dadku aysan rabin inay akhriyaan mowduucyada tirada iyo boqolleyda ereyada! Marka la eego taas, waxaan dhawaanahan maqlay waxyaabo waaweyn oo ku saabsan Lirik (oo bixisa adeegyada SaaS ee Salesforce iyo NetSuite).